I-SNOW PATROL: AMEHLO AVULE UKUHLAZIYWA KWE-ALBHAMU - IINDABA
Omnye umzamo ofanelekileyo kwiqela langaphambili le-twee, ngoku abasebenza kwiColdplay-njengee-ballad ezinkulu.
Kwangoko kule nyanga, i-Snow Patrol yaqala phezulu kwi-albhamu ye-albhamu yase-UK ngobude bayo besine, Amehlo Avulekile . I-Zippo-rockers ezigqwesileyo zeGlasgow zibambe indawo ephezulu ngokungathi ziduduza umthandi, zibaleka kwiPearl Jam ngaphambi kokuba ziyinike iRed Hot Chili Peppers. Ekhokelwa ngumculi / ugqirha uGary Lightbody, u-Snow Patrol waqala ukuhamba phambili ngo-2004 Umququ wokugqibela , ekhokelele kwi-UK ephezulu ezintlanu engatshatanga 'Run' kunye nokuvulwa kwesloty kumntu otyunjwe kakhulu kwi-Nobel Peace Prize (kunye nabahlobo). I-quintet ibivela kude ukusuka kwiirekhodi zabo zangaphambi kokurekhodwa kwelebheli ye-indie Jeepster- kwaye okona kubaluleke kakhulu, bebengcono.
Ukuba Amehlo Avulekile iswele ubungqabavu bokuqalwa kwayo ngaphambili, ihlala ingumzekelo oqinisekileyo webhendi eqhubeka nokuhlawula ngaphezulu kokunikezela ngomlomo kumbono womculo werock njengefom ebalulekileyo pop. Kwialbham yentlantsi kunye nokudubula, uLightbody usayinisa iinjongo zakhe zokumisa umhlaba: 'Kanye xa ndifuna ukuba yingozi yemoto / hayi enye nje ukugcwala kwezithuthi.' Ngokwesiqhelo, uLightbody uyaqhubeka nokutshintshelwa ngumntu. Ubungcali bakhe sisigaba seWile E. Coyote sothando olutsha- isisu esijija isisu sokuphuma kwelawa lonwabileyo kwaye ungazami ukujonga phantsi- kwaye uyichaza ngobukrelekrele bemvakalelo yeqhawe lakhe, uLou Barlow. Ngeli xesha isandi sikaPat Patrol esiphakamileyo samandla-pop sivakala phantse kufutshane ne-1990's fodder ye-Gin Blossoms njenge-sebadoh's antisocial din, kodwa imitya, ii-guitar ezicwecwe kakuhle, kunye nekwayara inceda ibhendi ukuba iphumeze imeko yayo ekhethiweyo: 'Kufuneka uzive uphefumla ngothando, 'u-Lightbody uyalela kwi-falsetto.
I-Opener 'Unako konke endinako' icwangcisa isantya sokuncwina ngamazwi alula, afihlakeleyo kunye namazwi oqobo angasemva. Kukho i-sophistry ekhohlisayo yokuzikhohlisa kwi-chorus enje, 'Andoyiki / Ngenxa yokuba unayo yonke into endinayo.' Eyona ngoma yesibini yemisipha, 'Izandla ezivulekileyo', icela uxolelo olwenziweyo ngempendulo- 'Kunzima ukuphikisana xa ungayi kuyeka ukwenza intsingiselo' - ngentambo efanayo enonomathotholo. Ngomzuzu owoyisiweyo uya kuthanda okanye uzonde, uLightbody ogama lakhe lingaphezulu kwe-50-state overlord, uSufjan Stevens. Nditsalele umnxeba u-elitist ongonelanga, kodwa ndifumana amandla kwimbono yamashumi amawaka abaphulaphuli abancinci befumana umhlaba obanzi womculo ngenxa yomculo omnye oqinileyo. (Kwaye ngokunyanisekileyo, nabani na ongenwe yile nto kufuneka ukuba bafumene iindlela ezintsha zokuziva bebhetele ngoku.)
Eyona nto ibuhlungu, Amehlo Avulekile ithatha isitayile se Umququ wokugqibela ukuya kwisiphelo sayo esikhazimlayo, esithandwayo- ayisiyi kuthi iyikhulule ngokupheleleyo ibhanti yokuthelekisa kwi-anthem medocrities efanayo noKeane. I-ballad enkulu 'Ukuleqa iimoto' kukulandela ngokulandelelana 'ukubaleka', kunye neempawu ezingathandekiyo endaweni yomdlalo wokuqala; 'Cima uMlilo kwiBhara yesiThathu' uveza amazwi kaMartin Wainwright kodwa uziva uxhalabile. Okwangoku, ukubetha kwentliziyo okuhamba esibhakabhakeni 'Ukuqala Ukuza Kum' kunye nebhokisi yomculo enesingqala 'Unokonwaba' ubuncinci. Ukuba kunzima ukucinga ngegama elithi 'Suff-yawn' liculwa kwiindawo zemidlalo, zama ukucinga iqela elalikade lizibiza ngokuba yiPolar Bear ngandlela thile idlala apho.
uviwo lwesifundo somzimba
Imibuzo kaHarry Potter Wand: Yintoni iHarry Potter Wand yam?
U-Eric B. kunye noRakim ukuze baSebenze ngokuSebenzayo beRhythm Hit 'Em
UHans Zimmer ubhengeza ukhenketho lwaseMntla Melika
LALA KAKUHLE. Usasazo uTrish Keenan
mac millers iingoma ezintsha
umculo ukusuka kwi-60s
ukubamba ukufa - umhadi ongenasiphelo
I-american pharoah jase harley
Sean spicer daft punk
zwan mary inkwenkwezi yolwandle